Suuqgeynta Internetka Dispensary iyo Mashiinka Raadinta Optimizaton
Suuqgeynta Internetka ee Dispensary
Sida loo dammaanad qaado suuqgeynta suuqgeynta ayaa kuu keenaya macaamiil cusub.
Waxaa jira siyaabo badan oo ganacsiyada yar yar ay u xayeysiiyaan si ay u keenaan macaamiil cusub oo ay ka mid yihiin, raadiyaha, TV-ga, boorarka, joornaalada iyo suuqgeynta internetka. Dhibaatada ay la kulmaan maareeyayaasha dukaanku waa sida si sax ah loogu sheego wadada xayeysiinta u shaqeyneyso. Ilaa aad su’aal ka weydiiso macaamil kasta oo cusub oo albaabka ka soo gala sidee ku ogaan doontaa habkee kuu keenaya, macaamiisha cusub? Macluumaadkani wuxuu muhiim u yahay kobcinta ganacsigaaga maxaa yeelay waxay u oggolaaneysaa maamulayaasha inay lacag badan u qoondeeyaan waxa shaqeynaya oo ay lacag ugu keydsadaan qorshooyinka suuq-geynta ee aan shaqeyn. Dhammaan xulashooyinka suuqgeynta ee la yaqaan, Google ayaa ah midka kaliya ee ku siiya xog aan la dafiri karin tirada macaamiisha ka helaysa meheraddaada raadinta internetka. Google waxay bixisaa tiro bille ah oo sax ah tirada macaamiisha ee gujiya tilmaamaha dukaankaaga bishiiba. Tani waa tilmaame cajaa'ib leh inta macaamiil ee cusub ee Google ay siineyso meheraddaada waxayna ku siinaysaa halbeeg adag oo lagu xisaabiyo maalgashigaaga suuq geynta iyo ka soo noqoshada macaashka.
Aynu ku tusno tusaale mid ka mid ah macaamiisheenna oo ah goob lagu iibiyo xashiishadda madadaalada oo ku taal Tacoma Washington. Jaantuska hoose waxaan ku siineynaa shaashad shaashadeed markii macaamilku raadsado dawooyinka Tacoma Washington ka dibna uu doorto Cannabis Green Collar. Dhinaca kore ee midigta kore waxaa ku yaal badhan ay ku qoran tahay tilmaamaha. Mar haddii macaamilku dhagsiiyo badhankaas waxay u qaadaysaa khariidad iyaga ka siinaysa tilmaamo ka imanaya meesha ay hadda ku sugan yihiin oo toos ugu tegaya ganacsigaaga. Waxa inta badan milkiileyaasha ganacsatadu aysan ogeyn in Google uu la socdo DHAMMAAN waqtiga macaamilku dhagsiiyo badhankaas. Kaliya maahan inay la socdaan tirada dadka gujinaya badhankaas laakiin way la socdaan HALKEE way ku yaalliin. Tani waa xog aad u qiimo badan oo aan lagu bixin karin ikhtiyaar kale oo suuqgeyn ah.
Waxa kale ee muhiimka ah ee ah in la fahmo ayaa ah kaliya macaamilka CUSUB ayaa riixi doona badhanka jihada maaddaama macaamiisha hadda jira ay horeyba u ogaan doonaan sida loo helo meheraddaada inta badan xaaladaha. Celceliska macaashka iibka ee dukaamada badankood waa kudhowaad 8 doolar macaamilkiiba. Aniguna waxaan ku xusuusinayaa in tani ay tahay oo kaliya haddii macaamilku sameeyo hal iibsi oo uusan dib u soo laaban oo waxaan ka ogaanay cabirrada hadda jira in maaddooyinka madadaalada madadaalada ay leeyihiin heerka haynta ee ku saabsan boqolkiiba 60 qiimaha runtii aad ayuu uga sarreeyaa. Eeg maqaalkeena: Waa imisa qiimaha macaamiisha wax iibsata
Marka la isku daro tirada macaamiisha ee lagu soo bandhigay burburkaan waxaan la nimid 1129 macaamiil cusub oo lagu keenay Google Search ee ganacsigan. Oo maskaxda ku hay tani waa mid loogu talagalay Google, kuma jiraan Bing iyo makiinadaha kale ee raadinta. Markii aan isku dhufanno 1129 x * 8.00 waxaan helaynaa $ 9,032 doolar oo faa'iido ah bishiiba. Hadda lambarkaasi aad buu u sarreeyaa maxaa yeelay qof kasta oo baaraya meheraddaada ma riixi doono badhanka tilmaamaha. Qaarkood waxay si toos ah u gali doonaan cinwaanka nidaamyadooda hagista ama waxay ka helayaan tilmaamo degel websaydh saddexaad ah. Dulucda maqaalkani waa in la muujiyo in maalgashiga Ku-habboonaynta Raadinta ay tahay mid ka mid ah xulashooyinka ugu macquulsan ee dammaanad-qaadka socodka macaamiisha cusub. Kaliya Google kuma siiso lambarro laakiin waxay ku siisaa meelaha ay ka imanayaan macaamiishaadu. Haddii aad aragto aag ka mid ah magaaladaada oo aad rabto inaad bartilmaameed ka dhigato waxaad shirkaddaada SEO ku dari kartaa ereyo dheeri ah oo dheeri ah si aad u keento xitaa dakhli intaa ka badan. Boqolkiiba 93 dhammaan raadinta maxalliga ah waxay lajiraan Google iyo haddii ganacsigaagu uusan ka muuqan bogga koowaad dhammaan macaamiishaas waxay aadayaan kuwa kula tartamaya.
At Isenselogic.com barnaamijyadeenna SEO waxay ku bilaabmaan ugu yaraan $ 500 doolar bishii waxaanan damaanad qaadaynaa shaqadeena. Haddii aynaan kordhin macaamiisha ka imanaysa albaabbadaada ee aad adigu ka hubiso Google Console waxaan ku shaqeyn doonnaa bilaash illaa inta aan ka yaraynayno tirada ugu yar ee macmiilkaaga imanaya. Nala soo xiriir maanta si loo helo baaritaan bilaash ah oo SEO ah waxaanan ku siin doonaa warbixin tartame oo bilaash ah iyo falanqaynta ereyga ganacsigaaga. Qiimaha $ 800 dollar.
Xiriiro waxtar leh.
Natiijooyinka Macaamiisheena Google
Immisa ayey Leedahay Lacagta Leafly iyo Weedmaps?
Xaqiiqooyinka 'SEO Dispensary SEO'